Dagaal waxa uu yahay waan garanaya oo waxaan ku hana qaaday/bar baaray xilli xabadda oo dhaceysa aan seexdo, iyadoo weli dhaceysana aan soo tooso | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dagaal waxa uu yahay waan garanaya oo waxaan ku hana qaaday/bar baaray...
Dagaal waxa uu yahay waan garanaya oo waxaan ku hana qaaday/bar baaray xilli xabadda oo dhaceysa aan seexdo, iyadoo weli dhaceysana aan soo tooso
Dagaal waxa uu yahay waan garanaya oo waxaan ku hana qaaday/bar baaray xilli xabadda oo dhaceysa aan seexdo, iyadoo weli dhaceysana aan soo tooso.
waxaa isoo maray intii aan noolaa xilliyo aan geerida aqbalay noloshana aan ka quustay, Waxaan soo maray xilli albaabka iskuulka aan wax ka baranayay dhufeys looga jiray anniguna aan casharkeyga qaadanayay, sababto ah ma aysan jirin maalin aan hubno in aysan xabad dhaceynin.
Sidaas darteed inta dhimatay xilligaas adag Allah u naxariisto inta noolna xalaadas adag ayeey ku qasbanayeen in ay wax ku bartaan kuna shaqeyaan, waxaan marqaati kaso nooqday dhimashada qaar kamid ah saxiibadey ehelkeyga iyo dariskeyga.
Uma maleynayo/mana filayo in ay jirto qof aniga nabadda iyo xasilloonida iga jecel iyo qof iiga baahi badan intaba, Waxaan jooga xiligii aan dhallinyarada nimadeeyda iyo aqoonteyda aan ka faa iideysan lahaa, oo aan nafteyda familkeyga iyo dalkeygaba wax tari lahaa.
Haddaba, Ma garba in maanta la ilasoo hor istaago kala dooro kaligii talis ama dagaal sokeeye? ma garba in maanta aniga oo waraaq iyo codbaahiye wata la igu tilmaamo dagaal ooge?
Walaalayaal anigu waxaan ahay gabar/hooyo Soomaaliyeed, Waxaan ahay astaanta nabadda, Dowladda iyadoo afar (4) sanno joogta dharaar cad dhiigeyga xalaaleysatay bal kawaran haddi ay Lix (6) sano sii joogto maxaa ka suurta gala? Labaatan (20) sanno markey joogtase maxa dhici kara bal adigu qiyaas?
Aniga makaroofankeyga wuxuu u taagan yahay nabad, Xasillooni iyo dimuquraadiyad, Codkeygana waxa uu u hiilinaya sarreynta sharciga iyo dowladnimadda.
Waxaan u bannaan baxaya in aan baajiyo dhiigaaga iyo keyga, mana aqbali doono in mugdi la galiyo mustaqbalka jiilka iga danbeeya, muwaadin waajib ayaa ku saaran u soo bax bannaanka, oo codkaaga ugu hiili dalkaaga.
Waxaa qortay Deeqo Soomali
Previous articleFarmaajo oo Shirkad u kireestay si uu taageero uga helo Aqalka Koongareeska Mareykanka
Next articleSiihayaa Wasiirka Warfaafinta Dubo oo ka Carooday Su aal la weydiiyey warihiina ku tilmaamay un uu Aroosyada ka duuba Cajaladaha
Ciidamada Tigray ayaa Weeraro is Dabo jooga kusoo Qaaday Fadhiismo milatariga Ethiopia iyo kuwa Eritrea ku lahaayen magaaloyinka, Enticho, adi salem, ganta afeshum, slehleka,...